Kheyre oo Xakameynta COVID-19 kala hadlay Dhaqaatiirta Soomaaliyeed | SMC
Home WARARKA MAANTA Kheyre oo Xakameynta COVID-19 kala hadlay Dhaqaatiirta Soomaaliyeed
Kheyre oo Xakameynta COVID-19 kala hadlay Dhaqaatiirta Soomaaliyeed
Ra’iisul Wasaaraha Jamahuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Kheyreyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, ayaa ka wada hadlay dardar gelinta qorshayaasha socda ee looga gaashaamanayo COVID-19.
Ra’iisul Wasaaraha oo ugu horreyn dhaqaatiirta ka dhageystay talooyinkooda ku aaddan xakameynta faafitaanka cudurkaan ayaa uga mahadceliyay dadaalkooda ku aaddan bed-qabka bulshada waxuuna ku dhiirri geliyay inay laba jibbaaraan dadaalka ay wadaan.
Kulanka oo ay goob joog ka aheyd wasiirka caafimaadka XFS, ayaa lagu soo bandhigay warbaxin ka hadlaysa guulaha laga gaaray qorshayaasha xakameynta cudurka, wixii ka dambeeyay markii ay dowladdu billaawday diyaar garowga qorshaha looga gaashaamanayo.
Wasiirka Caafimaadka oo kulanka la war bixisay ayaa caddeysay in si aad ah looga wada hadlay sare u qaadidda wacyi-gelinta bulshada iyo Karaantiilka dadka lagu arko astaamaha lagu garto cudurka.
Kulanka intii uu socday waxaa lasoo jeediyay in la adeekyo dhaqan gelinta tillaabooyinka xakameynta ee ay kamidka yihiin yareynta isu imaatinta Dadweynaha iyo Sare u qaadidda Nadaafadda maadaama Ka hor tagga cudurku ay ka wanaagantahay daaweynta.
Previous articleDHAGEYSO:-Wafdigii DF Somalia oo Qaadacay Qodobadii Shirkii Garoowe iyo Go’aano ay soo saareen
Next articleWaa kuma ninka loo wado Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed? & Doorka Villa Somalia